Kuklanka oo ahaa mid ay albaabbadu u xirnaayeen ayaa waxay labada dhinaca uga hadleen arrimo la xiriira doorka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya iyo u hambalyeynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo Isniintii lasoo dhaafay loo doortay madaxweyne.
Markii uu kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadaly Mr. Antonym isagoo sheegay inuu madaxweyanaha u gudbiyay hambalyo uu kaga siday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon, isagoo xusay in Qaramada midoobay ay ku qanacsan tahay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxweyne ee ka dhacday Muqdisho, taasoo uu ku guuleystay Mudane Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Soomaaliya lama uusan hadlin saxaafadda, waxaase kulankooda uu ahaa mid u muuqday inay isku afgarteen isaga iyo wafdigii ka socday Qaramada Midoobay, iyadoo UN-ku uu lug weyn ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya.
Kulankan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo lagu wado in maalinta berri ah uu si rasmi ah ugala wareego howlaha dowladda madaxweynihii hore, Shariif Sheekh Axmed oo uu kaga guuleysatay tartan adag oo ay labadoodu isugu soo hareen.
Doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa si weyn looga soo dhaweeyay dibadda iyo gudaha Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ay hambalyo u soo direen madaxda caalamka qaarkood oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka.